PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-10 - KUJIKE IZINTO NGOMZUZU WOKUGCINA
KUJIKE IZINTO NGOMZUZU WOKUGCINA
KUJIKE izinto ngomzuzu wokugcina engqungqutheleni ye-african National Congress (ANC) Kwazulu-natal, ebisenyuvesi yasezululand, Ongoye, eqale ngolwesihlanu.
Kule ngqungquthela bekumele kukhethwe ubuholi baleli qembu Kwazulu-natal, njengoba bahlakazwa obakhethwa ngokwedlule. Kuzokhumbuleka ukuthi inkantolo ephakeme yasemgungundlovu phambilini yabuhlakaza ubuholi obebukhona obabuholwa ngumnu Sihle Zikalala njengosihlalo. Inkantolo yachaza lobo buholi njengobabungekho emthethweni ngemuva kwesikhalo esafakwa ngamanye amalungu ayo, ayethi le ngqungquthela yayingekho emthethweni.
Ngolwesihlanu inkantolo iphinde yangenelela ngemuva kokuba amanye amalungu aleli qembu ehambe aya enkantolo futhi, afaka isicelo sokuba ingahlali le ngqungquthela ngenxa yokuthi kunezinto eziningi ezingalungile enhlanganweni esifundazweni. Isinqumo senkantolo siphoqe ukuba kujike izinto. Ngenxa yokuthi konke bese kumi ngomumo, nezithunywa eziqhamuka ezifundeni ezahlukene besezithelekile Ongoye, abaholi besikhashana bathathe isinqumo sokuyiguqula le ngqungquthela ibe ngeyokudingida inqubekela phambili neyokubonisana.
Umnu Mike Mabuyakhulu ekhuluma nezintatheli, uthe bayasihlonipha isinqumo senkantolo. Izithunywa eziye zimagange zithi ziyokhetha ubuholi azikunambithisisanga ukuba iqhubeke ngaphandle kokukhetha ubuholi, zathi asikho isidingo sokuba zihlale. Ngokuqhubeka kosuku izolo, kumenyezelwe ukuthi kwalona uhlelo lokudingida inqubekela phambili nokubonisana ngeke lusaqhubeka.